9 (2009) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
PG-13 2009 79 min Animation
Jessica M. Broughton, Marie-Eve Tetrault, Shane Acker
9.9.2009 . . .9ရကျ9လ 2009 ခုနှဈနမှေ့ာထှကျရှိခဲ့တဲ့9ဆိုတဲ့ Animation ဇာတျကားလေးကို ဒီနအေ့တှကျ တငျပေးလိုကျပါပွီ။ ဒီဇာတျကားလေးဟာ IMDb rating 7.1/10 အထိရရှိထားပွီး . Animation ကွိုကျတဲ့ ပရိတျသကျကွီးအတှကျ စိတျကနြေပျမှုအပွညျ့အဝရရှိစမေယျဆိုတာ ရဲရဲကွီးပွောခငျြ ပါတယျ။ ဇာတျလမျးရဲ့အကွောငျးအရာ အကဉျြးကိုမပွောပွတာက ကောငျးလှနျးတဲ့အတှကျ ပရိတျသကျကွီးကို spoiler အဖွဈမခံဘဲ ကိုယျတိုငျခံစားကွညျ့ရှုစခေငျြလို့ပါ။ ဒါရိုကျတာ Shane Acker ဖနျတီးထားပွီး အသံပိုငျးဆိုငျရာ သရုပျဆောငျတှကေလညျး ဇာတျလမျးရဲ့ အနှဈသာရထဲကတဈခုအပါအဝငျပါဘဲ။ဒီဇာတျကားလေးရဲ့နာမညျပေးထားတာက9. ဇာတျကောငျအကောငျလေးတှအေရအေတှကျက9.
ထုတျလုတျတဲ့ Date ကလညျး 9.9.09 . ထူးခွားမှုလေးတှနေဲ့ပွညျ့နှကျနတေဲ့9Animation . . .
9.9.2009 . . .9ရက်9လ 2009 ခုနှစ်နေ့မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့9ဆိုတဲ့ Animation ဇာတ်ကားလေးကို ဒီနေ့အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ IMDb rating 7.1/10 အထိရရှိထားပြီး . Animation ကြိုက်တဲ့ ပရိတ်သက်ကြီးအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရရှိစေမယ်ဆိုတာ ရဲရဲကြီးပြောချင် ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းရဲ့အကြောင်းအရာ အကျဉ်းကိုမပြောပြတာက ကောင်းလွန်းတဲ့အတွက် ပရိတ်သက်ကြီးကို spoiler အဖြစ်မခံဘဲ ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်ရှုစေချင်လို့ပါ။ ဒါရိုက်တာ Shane Acker ဖန်တီးထားပြီး အသံပိုင်းဆိုင်ရာ သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ဇာတ်လမ်းရဲ့ အနှစ်သာရထဲကတစ်ခုအပါအဝင်ပါဘဲ။ဒီဇာတ်ကားလေးရဲ့နာမည်ပေးထားတာက9. ဇာတ်ကောင်အကောင်လေးတွေအရေအတွက်က9.
ထုတ်လုတ်တဲ့ Date ကလည်း 9.9.09 . ထူးခြားမှုလေးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့9Animation . . .
Jessica M. Broughton Marie-Eve Tetrault Shane Acker
Option 1 storage.msubmovie.com 375 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 375 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 375 MB SD (480p)
Option4storage.msubmovie.com 930 MB HD (1080p)
Option5yuudrive.me 930 MB HD (1080p)
Option6sharer.pw 930 MB HD (1080p)
Option 8 yuudrive.me 2.2 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option9storage.msubmovie.com 2.2 GB FHD (1080p) DTS 5.1